हेर न त्यो केटालाई..कस्तो कालो, कस्तो घिनलाग्दो : टिकटकमा भाइरल आवाजवाला केटा किन प्रहरी हिरासतमा? – MySansar
हेर न त्यो केटालाई..कस्तो कालो, कस्तो घिनलाग्दो : टिकटकमा भाइरल आवाजवाला केटा किन प्रहरी हिरासतमा?
Posted on June 12, 2019 June 12, 2019 by Salokya
प्रनेश गौतमलाई चिन्नुहुन्छ?
मुख बङ्ग्याउने, बोली पिच्छे ट्यानट्यान टुनटुन म्युजिक इफेक्ट दिएर हँसाउन खोज्ने एकथरि कमेडियनहरुको सिन्डिकेटलाई तोड्ने नयाँ उदाउँदा स्टायन्ड अप कमेडियनहरुको थलो युट्युबको कमेडी सर्कल, M&S VMAG को Mic drop मा भिडियो हेर्नेहरुले चिनेकै होलान्।
टिकटक बनाउनुहुन्छ वा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरुले अरु नभए पनि आवाज चिन्नुभएकै हुनुपर्छ। टिकटकमा एउटा एकदम चलेको अडियो छ जसमा धेरैले भिडियो बनाएका छन्- हेर न त्यो केटालाई, कस्तो कालो, कस्तो घिनलाग्दो !
टिकटकमा भाइरल यो अडियो खासमा यो भिडियोबाट लिइएको हो-
हो, उनै प्रनेश गौतमलाई अहिले हत्कडी लगाएर प्रहरीले थुनेको छ। साइबर क्राइममा अनुसन्धानका लागि पाँच दिनदेखि हिरासतमा छन्। मान्छे मार्ने, डकैती गर्ने जस्ता खुँखार अपराधीलाई जस्तै प्रहरीले आफ्नो फेसबुक पेजमा उसको फोटो आँखा छोपे पनि परिचय खुलाएर यस्तो लेखेको छ-
खास लफडा के हो?
उदाउँदा कमेडियन प्रनेशको लोकप्रियता हेरेर Meme Nepal ले मुभी रिभ्यु गर्न लगायो। उनले आफ्नो विधा अनुसार व्यङ्ग्यात्मक समीक्षा गरे।
गल्ती त्यहीँनिर भयो। समीक्षा गर्न लायक फिल्मको पो समीक्षा गर्ने। यस्तो तोरिलाउरे फिल्मको समीक्षा गरेपछि जस्तो छ त्यस्तो भन्नै पर्‍यो। पाँच हजारे पत्रकारहरुलाई पैसा बाँडेर फिल्मको प्रचार र वाहवाह सुन्न बानी परेका व्यङ्ग्यले तिरिमिरी झ्याइँ भइहाले।
पाँच हजारे पत्रकारको अर्थ केहीले नबुझेका हुनसक्छन्। फिल्म बनाइसकेपछि त्यसको प्रचारको लागि निश्चित बजेट छुट्याइन्छ। अनि त्यो बाँड्ने ठेक्का एक जना फिल्मी पत्रकारले लिन्छ। अनि उसले त्यो बिट भएका सबै पत्रकारहरुलाई पैसा बाँड्छ- स्टायन्डर्ड रेट पाँच हजार रहेछ। त्यसैले पाँच हजारे पत्रकार भनेर बुझिन्छ।
उनीहरुको काम फिल्म जस्तै झुर भए पनि वाहवाह भनेर लेख्ने, फिल्मको प्रचार प्रसार गर्न सहयोग हुने खालको न्युज लेख्छन्। भिडियो बनाउँछन्।
फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित यत्रो काण्ड मच्चिँदा बोले त कोही? कठालो समात्ने फिल्मी पत्रकारले झापड खाँदा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भयो भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने नेपाल चलचित्र पत्रकार संघलाई के मतलब यो विषयमा? आफूलाई पैसा बाँडिरहने एउटा निर्माताले कमेडियनलाई थुनायो। व्यङ्ग्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरोमा उनीहरुलाई के वास्ता ?
बरु फिल्मका निर्देशक मिलन चाम्लिङ राई, जो आफूलाई मिलन चाम्स भन्न रुचाउँछन्, ले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न जाँदा मुद्दा दर्ता गरे भनेर पाँच हजारे पत्रकारले लेखे, युट्युब भिडियो बनाए।
जसलाई मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन्छ, प्रहरी कार्यालयमा होइन भन्ने कुरासमेत थाहा छैन, त्यस्ताले आफ्ना अन्नदातालाई के नराम्रो भन्थे र!
कस्तो थियो भिडियो?
जुन भिडियोबारे यत्रो लफडा भयो, त्यो भिडियो Meme Nepal ले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट डिलिट गरिसकेको छ। तर त्यो भिडियो भिमेओमा भने हेर्न सकिन्छ।
भिडियोमा क्रियटिभ क्रिटिसिजम छ। चक्कु देखाएकोले हतियारसहित भनेर समेत मिलन चाम्सका अनुयायीहरुले लेखे। तर त्यो भिडियोको मूल आशय व्यङ्ग्य हो र त्यसै अनुसार चक्कु देखाइएको भन्ने प्रष्टै हुन्छ।
भिडियोमा त्यस्तो कुनै कुरा छैन, जसले साइबर क्राइमको धारा आकर्षित हुन्छ।
त्यसो त नेपालमा साइबर क्राइमसम्बन्धी कुनै कानुन बनेको छैन। अहिले पुलिसले लगाउने भनेको इकमर्सलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को एउटा दफा टेक्ने हो। त्यो दफा ४७ को जे व्याख्या गरे पनि हुने शब्दावलीको यति दुरुपयोग भएको छ कि टेप रेकर्डरदेखि क्यामेरा बोक्नेसम्मलाई यही दफा अनुसार मुद्दा चलाइएको छ। अदालतले भकाभक प्रहरीले लगेको अधिकांश मुद्दामा सफाइ दिएको छ। तर प्रहरी दफाको अपव्याख्या गर्दै दुःख दिनलाई पावरवालाको प्रभावमा पर्दै समात्दैछ। फौजदारी अभियोग भएकोले हत्कडी लगाएर तर्साउन पाइन्छ। अनुसन्धान गर्ने भन्दै थुनामा कोच्न पाइन्छ।
भदौ १ गतेअघिसम्म त इन्टरनेट, कम्प्युटर आदिलाई समेट्ने खालको कुनै कानुन थिएन भनेर त्यो कानुनको दफा लगाइएको भन्न सकिन्थ्यो। तर अहिले त मुलुकी अपराध संहिता लागू भइसकेको छ। त्यस अनुसार मुद्दा चलाए भो त।
कसैलाई यो विषयले आफ्नो मानहानी गरेको लागेको भए मानहानीको मुद्दा लगाए भो त। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०७ मा छ त व्यवस्था-
यही अनुसार गरे भो त। किन विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउनु पर्‍यो?
मिम नेपालले आफ्नो विज्ञप्तिमा राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न पाउनु पर्छ भन्ने सरल विचारमा आधारित भएर लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरेको बताएको छ। फिल्मका निर्देशकले प्रनेश ड्रग्सको प्रभावमा रहेको भनेर समेत आरोप लगाएको भन्दै त्यसको खण्डन विज्ञप्तिमा छ।
भिडियो हेर्दा मलाई पनि लाग्छ, यो भिडियोमा त्यस्तो साइबर क्राइम हुने केही पनि छैन। कमेडी छ, जुन कसैलाई गाली बेइज्जति लाग्न सक्ला। तर त्यो गाली बेइज्जती हो कि हैन भन्ने चाहिँ अदालतले छुट्याउने हो। कमेडी र गाली बेइज्जति छुट्याउन नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो।
राम्रो फिल्म बनाउन नसक्ने अनि आलोचना सहन नसक्ने नेपाली फिल्मकर्मीहरुको पुरानै बानी हो। अलि अलि छिमेकी देशबाट पनि सिके हुन्थ्यो।
ठग्स अफ हिन्दुस्तान झुरै फिल्म बन्यो। त्यसका अनेक मिमहरु बने। तर आमिर खान, अमिताभ बच्चन कसैले गाली बेइज्जती भयो भनेनन्। फिल्मका निर्देशक विजयकृष्ण आचार्य मुद्दा दर्ता गर्न गएनन्।
नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहकुल थापा, जसको नेतृत्वमा अपराध महाशाखा छ, त्यहाँबाट एक पावरफूल निर्देशकले चाहे अनुसारको काम हुन्छ। लाग्दै नलाग्ने विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गर्ने भनेर एक कमेडियनलाई हत्कडी लगाएर थुनाइन्छ।
तर मुम्बई प्रहरी भने ठग्स अफ हिन्दुस्तानको मिम बनाएर ट्विट गर्दै बस्यो
Meme Nepal डिलिट गर्छु भन्दा पनि छाडेनन्
Meme Nepal का संस्थापक आदर्श मिश्रलाई पनि प्रहरीले पक्रेकोमा उनलाई भने छाडियो। उनले फेसबुकमा लेखेको स्टायटस अनुसार Meme Nepal को ब्रान्ड नै डिलिट गर्छु भन्दा पनि प्रनेशलाई छाडिएन।
कलाकार चुप, कमेडियन चुप
केही कलाकारहरु लाजै पचाएर नकचरो कामको प्रतिरक्षा गर्न निस्किए पनि धेरै कलाकार भने चुप छन्
त्याे ह्युमर मात्र थिएन, पागलपनकाे हद सम्मकाे चरम ईर्ष्या हाे । अालाेचना अत्यन्त अावश्यक रहन्छ । उपदेश अाश्यक हुँदैन ।
— Deshbhakta Khanal (@dbkhanal) June 11, 2019
यो देशका कमेडियनहरुलाई आफ्नो भाग खोस्न अर्को आएको थियो, खुच्चिङ पर्‍यो भन्ने भएको हो कि के हो? मदनकृष्ण, हरिवंश त बोलेका छैनन् छैनन्, सन्दीप क्षेत्री, मनोज गजुरेलहरुसमेत मुखमा माड लगाएर बसेका छन् यो विषयमा।
कमेडीको मर्म त उनीहरुले बुझ्नुपर्ने हो। अहिले खुच्चिङ पर्‍यो भनेर बस्दै गर्दा त्यही हतियार उनीहरुको टाउकोमा पनि कुनै दिन बज्रन आइपुग्नेछ भनेर पनि थाहा त पाउनु पर्ने हो।
बरु विदेशीले बोलिसके
A comedian is behind bars for something he said aboutamovie on YouTube. This repulsive & unacceptable on so many levels. The corporate media has failed us & many comedians are the truth tellers of our time. #FreePraneshGautam
— Lee Camp [Redacted] (@LeeCamp) June 11, 2019
A fellow comedian is behind bars in #Nepal and scared, all forafilm review he made on YouTube! I've had negative reviews but never believed they deserve prison! Comedians are social commentators, we need freedom of speech. This is ridiculous and inhumane. #FreePraneshGautam RT pic.twitter.com/k1qxteQr6R
— Brad Pitt – Comedian (@itsmarcusryan) June 11, 2019
साइबर कानुनबारे दख्खल राख्ने अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले हिमाललाई भनेका छन्, प्रहरीले प्रमाण विना नै मुद्दा दर्ता गरेको छ। अपराध हुनको लागि समाजलाई ‘हानि’ भएको हुनुपर्छ, उक्त भिडियोले समाजलाई कुनै ‘हानि’ पुर्‍याएको छैन। प्रहरी प्रशासनको यस्तो क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक समाजको लागि विडम्बना हो ।” यस्तो प्रवृत्तिले समाजको सिर्जनात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउने र मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्छ।
के, यत्ती मज्जाको ठट्यौली फिल्म रिभ्यू गरेको भरमा meme NEPAL (@nepalmeme) का प्रमेश गौतमलाई प्रहरीले साइबर अपराधको मुद्दा चलाउन लागेको हो ? त्यसो हो भने यो #गलत मात्र होईन #अनर्थकोपराकाष्ट हो र हाम्रो सामाजिक यात्राको दिशाको संकेत पनि !!https://t.co/VWpMo0Tcts via @YouTube
— Kanak Mani Dixit (@KanakManiDixit) June 10, 2019
कारवाही तिनलाई छैन, जो हाँस्यरसका भन्दै भद्दा चलचित्र बनाएर दर्शकको भावनासँग खेल्दै कमाउ धन्दामा लागेका छन्, सिर्जनाको स्वतन्त्रतालाई सत्ता र शक्तिको स्तुतीमा दुरुपयोग गरिरहेका छन्… यस्तो बेला पक्राउ पर्ने प्रनेसहरू नै हुन्, अर्थात् थोरै चेत भएका आम जनता! #FreePraneshGautam
— Rabin Giri (@rabingiri) June 11, 2019
युट्युवमा फिल्म समीक्षा गरेकै आधारमा चरित्रहत्याको आरोपमा साइवर क्राइमकोमा पक्राउ गरी सामाजिक सञ्जालमा राखेर चरित्रहत्या !
अव यी प्रहरी विरुद्ध चै कता हाल्ने होला उजुरी ! pic.twitter.com/g15mylm7sx
— KP Dhungana (@kpdhungana) June 10, 2019
कानुनले हेर्ने दर्ता भाको हो या हैन भन्दा के सामाग्रीबाट कुन कानुन उलंघन भो भन्ने हो। तर यहाँ सरकारी निकाय तर्साईरहन्छ। मिडिया तर्सिरहन्छ।
शासक कानुनको परिक्षणमा कमजोर खोज्छ र अदालतको परिक्षण गर्छ। बाटो जब खुल्छ अनी बलियो छु भन्ने भ्रममा रहेकाहरूको पनि पालो आउछ। प्रहरीले जसलाई पनि पक्राउ गरेर दुख नदेओस् भनेर पक्राउकाठमाडौं लगत्तै अदालत लाने प्रवन्ध भयो। अदालत चै जे केसमा ल्याए नि म्याद दिएर ल्याप्चे बन्यो।
उहिले : #मकैपर्व मकैमा लाग्ने कीराको वर्णनमा रातो टाउके र कालो टाउके किराले क्रमश: चन्द्र र भीम शम्शेरलाई होच्याइएको अर्थमा लिइयो | मकैको खेती किताब लेख्नेलाई ९ वर्ष जेल।
अहिले: वीरविक्रम२ फिल्मको कमेडी समिक्षा गरेका कारण ५ वर्षसम्म जेल थुन्ने #ETAClause47 लगाउन हत्कडी
— salokya (@salokya) June 11, 2019
दुई तिहाईको दादागिरी – प्रनेश गौतमलाई थुनाउँने कन्टेन्ट हेरे/सुनेपछि दिमागमा अायो । साइबर अपराध नि उबेलाको सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण ऐनको गणतान्त्रिक अवतार भएछ- पहुँच हुनेले अाफूलाई मन नपरेकालाई पुलिस हिरासतमा पुर्याइदिहाल्न सक्ने !!
— अजातशत्रु (@mahatsujit) June 11, 2019
मानहानी महसुस गरेको पक्षले मुद्दा हाल्न पाउँछ
फैसला अदालतले गर्ने होला
यो के तरिका हो नेपाल प्रहरीको
यो कुन राज हो .जंगे सासन फर्केको हो ??
हिम्मत छ भने अपराधी पक्रेर देखाउनुस
हाम्रो सुरक्षा गरेर देखाउनुस .@NepalPoliceHQ pic.twitter.com/XbRJBgJLLq
— योगमाया sarali (@saralagautam1) June 11, 2019
व्यंग्य गर्ने टि.भि सिरियलकाे पनि कति दिन बाँकी छ कुन्नि । गाइजात्राकाे बेला गरिने व्यंग्यपूर्ण कार्यक्रम पनि कुन वर्ष देखि बन्द नै हुने हाेला । तिहारका व्यंग्यपूर्ण देउसी भैलाे पनि कुन बेला निभ्ने हाेला । मुद्दा लाग्नै पर्ने धेरै भिडियाे छन् युट्युबमा तर @nepalmeme काे ??
— Prabin Subedi (@Nepallawyer) June 10, 2019
र, अन्त्यमा। युट्युबरलाई पक्रने भन्नुहुन्छ? ल हेरौँ त निर्मला पन्तको हत्यारा गृहमन्त्रीको छोरा भएको भनेर बोल्दै नबोलेको विषयलाई हेडलाइन बनाएर राख्ने युट्युबरलाई पक्रेको।
यस्ता हुँदै नभएको जानकारी र सनसनीपूर्ण झुटा शीर्षक राखेर समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने युट्युबर कति छन् कति, उनीहरुले समाजलाई बढी हानी गरेका छन्। तर एउटा क्रियटिभ क्रिटिसिजम गरेर भिडियो बनाएको केटोलाई पक्रेर के नाटक गरेको?
2 thoughts on “हेर न त्यो केटालाई..कस्तो कालो, कस्तो घिनलाग्दो : टिकटकमा भाइरल आवाजवाला केटा किन प्रहरी हिरासतमा?”
पीडक बात अधिकतम छ्यतिपूर्ति तिराउने कानुन बन्नु पर्छ; चाहे त्यो प्रहरी बा नेताहरु बाटै किन नहोस/ मिलापत्र र सहमतिमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउने कुरा निषेधित हुनु पर्छ र अपराधिक घटना भय पछि घटना र प्रमाणले के आरोप लाग्छ र के सजाय दिने कुरा अदालत बाटै मात्र हुने ब्यबस्था हुनु पर्छ/ अपाराधिक घटना कहिँ भयको छ भने कसैको उजुरी परोश बा नपरोश प्रहरीले कार्याविही गर्ने पर्ने कानुन बन्नु पर्छ/प्रहरीले उजुरी नलिय बा प्रहरीको कार्यवाही उपयुक्त नलागे पीडित आफैले अदालतमा मुद्दा गर्न पाउने हुनु पर्छ/ यति गर्न सके अरु त् अरु दलिय अपराधीहरु समेत तह लाग्छ/
गल्ती मिम नेपाल मात्र हैन सबै मिम पेज को छ। आफुले पैसा पायो भने जस्तो सुकै फिल्म भए नि धमाकेदार भन्दै हजारौ पोस्ट गरेर प्रमोसन गर्छन पैसा नदिए फिल्म को खेदो खन्छन। मिम भन्दै ब्यक्तिगत लान्छना मिम नेपाल ले धेरै पटक गरेको छ। केही अघि गरेको पुर्व मिस नेपाल निकिता बारेको पोस्ट हेर्द हुन्छ ।
तर मिलन चाम्स ले एति सानो भिडियो को कुरा लाई यहाँ सम्म लग्न नहुने हो।